Lenovo i3 4th gen Laptop with AMD R5 2GB အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Lenovo i3 4th gen Laptop with AMD R5 2GB
#Game သုံး၊ AutoCad သုံး၊ Graphic သုံး၊ အားလုံး အဆင်ပြေစေမယ် #Lenovo i3 Laptop
#အလုံးသန့်ရမယ်၊ error လုံးဝကင်းတယ်နော်
#CPU. Core i3 4th generation နော်
#Ram. 4GB ပါတယ်နော်
#Hard disk. 500GB ကတော့မပါမဖြစ်ပဲ
#Graphic. AMD R5 2GB + Intel HD 2GB
#Battery. 3hrs အေးဆေးသုံး
#DVD. wifi all fine အားလုံး good တယ်ဆို
အမည်: Lenovo i3 4th gen Laptop with AMD R5 2GB